Shandura: Zvikonzero zvina zvekusashandisa YouTube Vhidhiyo Inosimbisa Pane Rako Bhizinesi Webhusaiti | Martech Zone
Svondo, Kurume 28, 2021 Svondo, Kurume 28, 2021 Douglas Karr
Kana kambani yako iine vhidhiyo yehunyanzvi yawakashandisa zviuru zvemadhora pairi, unofanirwa kunyatso shambadzira mavhidhiyo kuYouTube kutora mukana wekutsvaga kweYouTube…. ingova nechokwadi chekuti iwe gadzira yako YouTube mavhidhiyo paunoita. Izvo zvakati, haufanire kunge uri kupinza mavhidhiyo eYouTube pane yako webhusaiti saiti… nekuda kwezvikonzero zvishoma:
YouTube iri kuteedzera mashandisiro emavhidhiyo iwawo yakanangwa kushambadza. Sei iwe uchida kugovera yako vashanyi 'chinangwa neGoogle kuti vakwanise kusundidzira kushambadzira kune vako vanokwikwidza?
Kunze kwekunge iwe wakanganwa, pamwe uri kuenda akakodzera mavhidhiyo evanokwikwidza pane yako YouTube mutambi! Fungidzira uchishanyira saiti yako, uchiona yako vhidhiyo, ipapo vhidhiyo yemukwikwidzi wako inoratidzwa seimwe yakakodzera nzira. Ouch!
Tenda kana kwete, YouTube ndeyechokwadi inononoka uye mavhidhiyo kazhinji haatangi zvachose dzimwe nguva sezvo vhidhiyo iri kubhaiza. Hei… ndezvemahara, handiti? Zvakanaka… kwete zvebhizimusi riri kuyedza kuvhara mutengi hazvisi. Pane zvachose mutengo wekumhanyisa paInternet.
YouTube's Video Player haina kunyanya customizable… Cherekedza iyi vhidhiyo pazasi apo ini ndine mashoma sarudzo yekusarudza kubva… tarisa paYouTube, tinya pane iyi link kuti uvhure muYouTube, Tarisa Gare gare paYouTube, Goverana, kana pinda play. Zvese zvakapihwa zita reYouTube panzvimbo pezita rako. Wadii kungo mutambi asingavhiringidzi- uye anoshanda?
Ini ndinofanira pamwe kukuraira iwe kuti udzivise kutora mavhidhiyo pane yako saiti zvakare. Yako yakajairika webhu inomiririra haina zvivakwa kumagetsi kutenderera kuzviuru zvevashanyi. Muchokwadi, pane mukana wakanaka wekuti iwe uchapaza kuburikidza nekumwe kurodha zvikumbaridzo uye ubhadhariswe zvimwe. Iwe zvechokwadi unoda vhidhiyo inomiririra ... kwete chete YouTube.
Mira wechipiri, iwe unoti… Doug… iwe nguva dzose pinda YouTube mavhidhiyo pane yako saiti. Zvakanaka, vanhu, ichi chinyorwa… kwete bhizinesi saiti. Ini ndinonyatsoda kupinza mavhidhiyo kubva kuYouTube kuitira kuti vagadziri vawane mamwe maonero nemikana yekuti vanhu vawane nekunyorera kwavari. Pandinenge ndine mamwe mavhidhiyo ehunyanzvi akaitirwa bhizinesi rangu, ndichave ndichivatambira Shingairira.
Iko kune, chokwadika, kumwe kusarudzika… iwe uri YouTuber!
Shandura SmartVideo: Kurumidza Vhidhiyo Kubata
Swarmify inopa yakasimba uye inokurumidza vhidhiyo yekugadzirisa mhinduro kune yako webhusaiti webhusaiti. Heino pfupiso vhidhiyo:
Shingairira inopa zvimwe zvisingaite maficha:
CDN - Vane yepasi rose content delivery network (CDN), zvichireva kuti pane latency shoma pakati pemunhu ari kukumbira vhidhiyo nenzvimbo yacho iri kugoverwa.
Buffer-Yemahara Kutamba - SmartVideo inoshandisa Swarmify's patent-yakamirira kuendesa mhinduro, zvakanyanya kudzikisa stall-outs ne8x.
Kuenderera Mberi Kugonesa Vhidhiyo Kutenderera - Mukutamba kwese, SmartVideo inoramba ichiongorora ruzivo rwevhidhiyo yemumwe nemumwe mushandisi uye inodzivirira kukundikana zvisati zvaitika.
Kodhi Yekushandisa - Vashanyi vanoita kuti vhidhiyo igadziriswe pachigadzirwa chavo kuti vaunze chakanakisa chiitiko. Kunetseka-kusununguka uye otomatiki kuvandudzwa kwemidziyo mitsva.
Yakachena, Inotsausa-Yemahara Player - Ita zvimwe zvekutengesa, uye udzikise bounce mitengo nekuchengeta vashanyi vakatarisa pane yako mhando. Giant marogo nemavhidhiyo akafanana akagadzirirwa kubvisa vatengi vako.
WordPress Plugin - Hapana chikonzero chekutenderedza nekutenderera uye zvinyorwa, SmartVideo ine plugin yekumutsa iwe nekumhanya nyore.
Pricing - Iwe haufanire kurangwa nekushandira zvemhando yepamusoro zvemukati pane yako saiti. Ndicho chikonzero SmartVideo kubhadharisa hakubvi pane bandwidth, chete vhidhiyo maonero.
Heino padivi-ne-parutivi kuenzanisa kwekumhanya:
YouTube Vhidhiyo Embed
Kana izvo zvisina kukwana, SmartVideo inongotora mavhidhiyo ako kubva kuYouTube, anoasungira, uye anoachengeta. Mushure meizvozvo, mutambi weYouTube akatsiviwa zvachose uye ako mavhidhiyo akaitirwa pane yedu yepasirese yekuendesa network uye yakashanda kuburikidza neyedu kukurumidza tekinoroji yekutamba.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Shandura SmartVideo.
Tags: kubhaizabhizinesi vhidhiyo kubatayemakambani vhidhiyo inomiririrakutsanya vhidhiyo yekubataclipusaswarmifyvhidhiyo cdnencoding yevhidhiyovhidhiyo inomiririravideo hostingWordpress pluginYouTube imwe nzira
Kushambadzira Kunoshanda Sei? Chii Chinoita Kuti Vanhu Vatenge?